RealThadin - Page 68 of 111 - News and Media
June 20, 2020 RealThadin 0
ဦးချစ်ေ မာင်လမ်းပေါ် က ABC ဆိုင် ဓားပြတိုက်ခံ ရပြီး ၄ နှစ်ကေ လးကိုထိုးကြိတ်သွား တဲ့ဖြစ်စဉ် ယခု သတင်းကို ( Aye thandar Myint ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် […]
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ထူးဆန်းစွာ နေအိမ်မှတိတ်တဆိတ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ကို သားဖြစ်သူမှလူပျောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ထားရာမှ အိမ်နှင့်မနီးမဝေး ပေ ၁၅၀ အကွာရှိ ရေတွင်းအဟောင်းထဲတွင် မသင်္ကာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှမြေတူးစက်ဖြင့်တူးဖော်ကြည့်ရာ အလောင်းအားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လူသတ်တရားခံသည် အသက် ၈၃ နှစ်အရွယ် သေဆုံးသူ၏ခင်ပွန်းဖြစ်နေဟု ရဲမှူးချုပ်မှ Anuphat မှယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရ ။ […]
အာ ဖ ရိ က တိုက်၊ ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံငယ်လေးက ခရစ်ယာန်မိသားစုမှာ Steven(စတီဗင်) ကို ၁၉၆၆-ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ငယ်ငယ်က ဘာသာတရားဆိုလို့ ခရစ်ယာန်နဲ့ အစ္စလာမ် ၂-ခုတည်းသာရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။၁၀ ကျော် သက် အရွယ်ရောက်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဂေါတမ ဆိုတဲ့ […]
သိ န်း ၃၀၀ တန်ကြေး ရှိ အိမ်နှင့်ခြံ အား NLD ရုံးဖွင့် ရန် လှူဒါ န်းလိုက် တဲ့ မိသား စု ပည် ခရိုင်သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်း၌ NLD ရုံးဖွင့်ရန် သိန်း၃၀၀ခန့်တန်ကြေးရှိသောအိမ်နှင့်ခြံအား ‌ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ နှင့် ရုံးဖွင့်ပွဲကို […]
ကံကောင်းချင်ရင် စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါ ဘုရားရှိခိုးဖို့လည်း မပျင်းကြပါနဲ့
ကံကောင်းချင်ရင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းပါနဲ့ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာ […]
ယနေ့ မနက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့ အလှဆင်ထားသော ပန်းပင်ကျောက်စည် အလုံးပေါင်း ၃၉ လုံ ဖျက်ဆီးခံထားရ . . .
ယနေ့ မနက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့ ဝန်ဇင်းကန်ဘောင်ပေါ်ရှိ ထီလာစည်ပင်သာယာမှ ပြည်သူများ၏ အခွန်ငွေများဖြင့် အကုန်ကျခံ အလှဆင်ထားသော ပန်းပင်ကျောက်စည် အလုံးပေါင်း ၃၉ လုံးတို့ကို စိတ်ဓာတ်ညံဖျင်းစွာဖြင့် ဖျက်ဆီးခံထားရသည့် ဓာတ်ပုံမျာ crd-Khin Ko Latt Myanmar_Online_News ယနေ့ မနကျ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မိတ္ထီလာမွို့ […]
ဒူဘိုင်းမြို့က ပထမဦးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒူဘိုင်းမြို့ကပထမဦးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း အာရပ်စော်ဘွားနိုင်ငံ ဒူဘိုင်းမြို့က ပထမဦးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ သာသနာတော်ကြီး စည်ပင်ပြန့်ပွားစေဖို့ သံဃာတော်တွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေထဲကမှ ပရိယတ် ပရိပတ် အရည်အသွေး ထူချွန်တဲ့သံဃာတော်တွေပေါ်ထွန်းမှ သာသနာတွေပြန့်ပွားနိုင်မည်။ သာသနာပြန့်ပွားမှ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲ နှလုံးထဲ ဗုဒ္ဓတရားတော် […]
နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီးကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ ပဌာန်းဆုတောင်း
နေ့စဉ်ပဌာန်း အရှည်ကြီးကို မရွတ်နိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ ပဌာန်းဆုတောင်း ပဌာန်းအကျယ် မရွတ်နိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ သရဏဂုံသုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလ စောင့်တည်ပြီး ဒါလေးကို ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်….. အရမ်း အချိန်ပေးစရာမလိုဘဲ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဌာန်းဒေသနာတော်အား ဆုတောင်းနည်းပါ…. ပဌာန်းအကျယ်ရွတ်ဖို့ အရမ်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ နေ့တွေမှာ ဒါလေး […]
တောင်ကြီးမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၇၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အပင် ၅၀၀ စိုက်ပျိုး
“တောင်ကြီးမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၇၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အပင် ၅၀၀ စိုက်ပျိုး” တောင်ကြီးမြို့ တောင်ချွန်းတက်လမ်း၊ ရွှေမုဌော လမ်းဆုံတွင် ယနေ့ ဇွန်၁၉ ရက် နံနက် ၇း၀၀နာရီအချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၇ ၅ နှစ် မြောက် […]